Issimada Qardho oo beeniyey war
24 Nov 24, 2012 - 4:00:28 AM
Odayaasha dhaqanka iyo Isimadda Gobolka Karkaar ayaa beeniyey in dibad baxyo looga soo horjeedo Madaxweynaha Puntland ay ka dhaceen magaalada Qardho xarunta gobolka Karkaar kadib socdaal uu halkaasi ku tagay maalinimadii shalay.
Islaan Mahad Islaan Maxamuud Islaan Cilmi oo ka mida Issimada Gobolka Karkaar oo shir Saxaafadeed warbaahinta ugu qabtey Qardho maanta 24 November,2012 ayaa sheegey in la buun buuniyey wararka mudahaaradyo aan jirin balse ay ahaayeen dad yar oo la khaldey.
Waxa uu tilmaamay Islaanku in Madaxweynuha Qardho ay si weyn ugu soo dhoweyeen ugana hortageen magaalada banaankeeda,iyadoona uu ku eedeeyey dad uusan cararaabin inay ka danbeyeen caruurta banaanka loo soo saarey.
‘’Madaxweynuhu waxa uu yimid dadkiisi iyo dalkiisi ,sii diiran ayaan u soo dhoweyney ,waxaan dadka u sheegeynaa inaysan jirin wax looga soo horjeedo xukuumadda Madaxweyne Farole’’ ayuu yiri Islaan Mahad.
Dhinaca kale wareysi uu BBC-da siiyey wasiirka Amniga Puntland Col.Khaliif Ciise Mudan ayaa ku eedeeyey inay rabshado iyo qalalaaso ka wadaan Qardho xubno horey uga tirsanaa dowladda oo ku guul dareystey inay ka soo baxaan xilkoodi islamarkaasina laga qaadey boosaskoodi.
Laba Qof ayaa ku dhaawacmey shalay ka dib rasaas ciidanka boolisku fureen si ay u kala ceyriyaan caruur iyo haween banaanka loogu soo saarey sidii ay fowdo u sameyn lahaayeen,waxana saraakiisha Cisbitalka Qardho GO u xaqiijiyeen in xaladooda caafimaad ay soo wanaagsanaaneyso.
Halkan ka dhageyso Codka Islaan Mahad Islaan Maxamed Islaan ee maanta